दै”व पनि कति अ’न्याय गर्छ? एकै परिवारका ५ जना ४ दिनदेखि बे’पत्ता – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/दै”व पनि कति अ’न्याय गर्छ? एकै परिवारका ५ जना ४ दिनदेखि बे’पत्ता
१९ असोज, कैलाली । बाजुराको हिमाली गाउँपालिका-५ स्थित कवाडीमा शुक्रबार बेपत्ता भएका एकै परिवारका ५ जनाको अवस्था अझै अ’ज्ञात रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
कवाडीमा बस्दै आएकी ३० वर्षीया सत्ता नेपाली शुक्रबार साँझ ५ वर्षीया छोरी आरती, ४ वर्षकी सन्तोषी, २ वर्षका छोरा सम्मान र एक वर्षीया छोरी किस्मतीसहित बेपत्ता भएकी थिइन् । छोराछोरीसहित कवाडी नदीमा नुहाउन गएकी उनी नुहाउने क्रममा बे’पत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रहरी निरीक्षक लोकेन् सिंह ठगुन्नाले बताए ।
घटना भएलगत्तै प्रहरी निरीक्षक ठ’गुन्नासहितको टोली खोजी कार्य रहेको छ । नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र स्थानीयले खोजी गरिरहेका छन् । तर, ४ दिनसम्म पनि अवस्था अ’ज्ञात रहेको उनले प्रहरीले जनाएको छ । कवाडी नदी र कर्णाली नदीको दुरी २०० मिटर मात्रै छ ।
कवाडी नदीबाट ब’गेर कर्णाली नदीमा गएको हुन सक्ने उनले बताए ।हामीले धेरै ठाउँमा खोजी गरिसकेका छौँ,’ उनले भने, अहिलेसम्म कतै कोही भेटिएका छैनन् ।’परिवारका सदस्यहरुलाई नदीमा नुहाउन जाने भन्दै उनी घरबाट निस्किएको प्रहरीले जनाएको छ ।